Muqdisho oo saakay markale ku soo toostay dilal qorsheeysan - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
HomeWararkaMuqdisho oo saakay markale ku soo toostay dilal qorsheeysan
Muqdisho oo saakay markale ku soo toostay dilal qorsheeysan
Muqdisho oo saakay markale ku soo toostay dilal qorsheeysan. Kooxo hubeysan ayaa lagu soo waramayaa in ay goordhow dil ka geysteen xaafado ka mid ah Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaana ka soo baxaya faah faahino dheeraad ah. Dilaka ayaa la sheegay in loo geystay Laba qof oo la sheegay in ay ahaayeen dad shacab ah,islamarkaana lagu toogtay nawaaxiga halka loo yaqaano Carwo Iitka,ee magaalada Muqdisho.
Dhanka kale dad goobjoogayaal ayaa sheegay in ay kooxaha hubeysan dhowr Xabadood madaxa kala dhaceen Labada ruux,islamarkaana ay goobta ku dhaceen,markii la dulyimidna la xaqiijiyay in ay geeriyoodeen. Kooxihii falkaas dilka ah geystay ayaa goobta iskaga baxsaday,waxaana markiiba goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda fedraalka Soomaaliya oo Meydka Labada ruux goobta ka qaaday.